Monday, 26 Dec, 2016 9:28 AM
यसमा राजाको प्रतिक्रिया के थियो ?
यसमा राजाको सहमति थियो । मैले तीनवटा कुरामा जोड दिएँ । पहिलो कुरा हामीले यहाँ सिक्किम जस्तो स्थिति आउन दिनु हुन्न । दोश्रो इरानको जस्तो अवस्था आउन दिनु हुन्न । र तेश्रो अफगानिस्तान जस्तो हालत पनि आउन दिनुहुन्न ।
तपाईले सिक्किमको कुरा किन उठाउनु भयो ? के नेपाली सन्दर्भमा यसको कुनै प्रासंगिकता थियो ?
मेरो विचारमा सिक्किमको स्थिति स्पष्ट थिएन । त्यो न पूर्णरुपमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्य थियो न त भारतको एक भाग नै । चोग्याल सिक्किमको अन्तराष्ट्रिय स्तर उठाउन चाहन्थे । तर उनले जनताको सहयोग लिएनन् । त्यही उनको भूल थियो । जनताको सक्रिय समर्थन नभएकाले उनले आफ्नो उदेश्य पूरा गर्न सकेनन् ।
के तपाईले आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलापका लागि कुनै भारतीय नेताबाट आर्थिक सहयोग लिनुभयो ?
अहँ, मैले कुनैपनि भारतीय राजनीतिक नेताबाट कुनै आर्थिक सहयोग लिएको छैन । तर, म भारतमा रहँदा र नेपालमा जेल पर्दा मेरा राजनीतिक र गैरराजनीतिक मित्रहरुबाट मैले सबै प्रकारका सहयोग प्राप्त गरेको छु । वास्तवमा म यहाँ जेलमा परेको बेला मेरा परिवारका सदस्यहरुको हेरचाह मेरा भारतीय मित्रहरुले गरिदिनु भएको थियो ।
मेरा मित्र देवेन्द्रप्रसाद सिंहलाई म विशेष सम्झन्छु । किनभने उहाँले मेरो परिवारलाई मद्दत गर्नुभयो । मेरा बालबच्चाका लागि उहाँ धर्मपिता जस्तै हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै अरु मित्रहरु पनि थिए । मलाई मद्दत गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरुमा मेरा समाजवादी मित्रहरु थिए जसमध्ये जयप्रकाशनारायण सर्वाधिक महत्वको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँले पनि मलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको होइन र मेरो राजनीतिक कार्यका लागि मलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको पनि थिएन । अर्का मित्र राममनोहर लोहिया हुनुहुन्थ्यो तर उहाँबाट पनि आर्थिक सहयोग लिइनँ ।
जवाहरलाल नेहरु नि ?
नेहरुले मलाई राजनीतिक सहयोग धेरै किसिमले गर्नुभयो तर आर्थिक सहयोग भने होइन । आर्थिक सहयोग कसैबाट पनि लिइनँ । तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने म बिरामी हुँदा मैले असंख्य भारतीयहरुबाट, जस्तो डाक्टरहरुबाट आत्मीय सहयोग पाएको छु । तपाईलाई सुन्दा आश्चर्य लाग्ला, मलाई एउटै मात्र पनि भारतीय डाक्टरले शुल्क लिएनन् । बम्बईमा, कलकत्तामा, पटनामा र बनारसमा कहीँ पनि एकजनाले पनि लिएनन् ।
म अस्पतालमा हुँदा पनि सबै खर्च या त डाक्टरहरु आफैंले या अन्य मेरा भारतीय मित्रहरुले बेहोरिदिन्थे । उनीहरुमध्ये कतिले त म औषोधोपचारका लागि न्यूयोर्क जाँदा पनि मद्दत गरे । त्यस्तो सहयोग मैले पाएको छु तर राजनीतिक कामका लागि होइन ।
चन्द्रशेखरका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
हो, उहाँबाट मैले समर्थन पाएँ तर आर्थिक सहयोग लिइनँ । म न्यूयोर्क अस्पतालमा भर्ना भई बसेको बेला एक पटक उहाँले मेरो श्रीमतिलाई न्यूयोर्कमा मलाई भेट्न जान टिकट किनिदिनुभएको थियो । यसअतिरिक्त मैले उहाँबाट निरन्तर नैतिक र राजनीतिक समर्थन पाइआएको छु । के एउटै मात्र डाक्टरले मसँग शुल्क नलिनु आश्चर्यको कुरा होइन ?
तपाईले कुनै भारतीय नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ ?
औपचारिक तवरमा यसबारे मलाई कतै उल्लेख गरिनु राम्रो नहोला तर पहिलो आमचुनावका बेला १९५२ मा मैले समाजवादी दललाई केही आर्थिक सहयोग गरेको थिएँ । मेरा पार्टीका स्थानीय नेताहरुलाई पनि समावादी दलका केही स्थानीय उमेद्वारहरुलाई मद्दत गर्न निर्देश दिएको थिएँ ।
भोला चटर्जीको ‘बीपी कोइराला एक क्रान्तिकारी व्यक्तित्व’ पुस्तकबाट